iMovie Nchọpụta nsogbu Atụmatụ
iMovie nsogbu nwetara gị ala? Echegbula! Nke a subsection nke iMovie ndu e mere na-enyere gị aka troubleshoot iseokwu ị pụrụ ịdị na-enwe. Leba anya ugbu a n'okpuru na-ahụ ihe ngwọta nke nsogbu ị na-enwe na iMovie.
# 1. iMovie-eme akụghịna
The "iMovie-eme n'iyi" nke nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ ihe mere:
iMovie oru ngo faịlụ ọkọdọ emerụ - ahịhịa ndị rụrụ arụ faịlụ na tinye nri n'anya.
Nsogbu na iMovie Cache nchekwa - Mkpofu Cache.mov na Cache.plist. Mgbe ahụ na-eke ọhụrụ User-Akaụntụ na abanye n'ime nke a. Mgbe ahụ iMovie ga-ike nile pref. na cache faịlụ ọhụrụ na njehie free.
Mmasị na-ezighị ezi - rụkwaa mmasị.
Njikwa codec nsogbu - tọghata video faịlụ na iMovie dakọtara usoro. Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Pụrụ ime ka ọ dị mfe ọrụ. Ọ na-enyere gị dezie vidiyo na iMovie na video na ọdịyo zuru okè playback.
# 2. iMovie dịghị ụda
Dị ka "iMovie na-n'iyi" nke, "iMovie dịghị ụda" nke nwere ike ịbụ n'ihi iche iche ihe. Ọ bụrụ na ị na-n'aka na ndị Project faịlụ bụghị e emerụ na preferenses ziri ezi, ọ pụrụ ịbụ na a faịlụ codec nsogbu. Ke ikpe dị ka nke a, i kwesịrị iji tọghata video faịlụ na iMovie n'ụzọ zuru ezu dakọtara Ọkpụkpọ na Wondershare Video Ntụgharị maka Mac pụrụ inyere gị aka na nke ahụ.
# 3. Ụda na iMovie bụ nke mmekọrịta
N'ihi na kasị mma mmekọrịta, ọ na-atụ aro na 16-bit ụda na-eji na iMovie. Ọ bụrụ na ị dị ụda na 12-bit audio, ịgbanwe ntọala na gị igwefoto na mgbe ahụ nd-mbubata gị footage. Mgbe ahụ wepụ ọdịyo si gị footage. Ị nwere ike ịga na "Dezie" menu na pịa "Họrọ niile". Right pịa imeghe dropdown menu, ma họrọ "ikwụpu audio". Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike mmekọrịta ha aka.
# 4. iMovie apụghị jikọọ na video igwefoto
E nwere ọtụtụ ihe na-emetụta ndị Njikọta. Ma ụfọdụ na-agbanwe agbanwe na-agụnye iji a FireWire njikọ kama USB. Ị nwere ike ịkwụpụ na mgbe ahụ jikọgharịa FireWire ụdọ Malitegharịa ekwentị igwefoto na iMovie. Mgbe ahụ gbanyụọ "FileValut" atụmatụ ke "Nche Mmasị" na ịgbanwee gị igwefoto ka "DV," "VCR" ma ọ bụ "VTR" mode. Ịkpọ onye nwe ntuziaka maka gị camcorder iji jide n'aka na ị nwere ya melite kwesịrị ekwesị na jikọọ na-ekwurịta okwu na kọmputa gị.
# 5. Apụghị mbubata GoPro video ka iMovie
Ọkọlọtọ mmepụta faịlụ mepụtara site na GoPro elu definition igwefoto bụ n'ụdị ihe MP4 akpa na H.264 codec. Ọ bụ adịghị adabara ma ọ bụ na-atụ aro maka edezi nzube. N'ihi ya, ọ bụ ihe kacha mma iji tọghata faịlụ tupu ọ bụla edezi ọrụ. The usoro-atụ aro site GoPro si ukara website bụ iji ha defaulted omume - CineForm, ma e nweghị nkwa nke ịga nke ọma na akakabarede maka ebugote jidesie iMovie. Ebe i nwere ike na-enye ya a na-agbalị na Wondershare Video Converter Ultimate for Mac.
# 6. Apụghị mechaa iMovie oru ngo
Nke ahụ bụ n'ihi iMovie faịlụ a na-ede na nkwado ndabere site Time Machine. Ruru faịlụ ịbụ Iji ọzọ usoro, iMovie apụghị rụchaa Filiks na ọ malitere. Dozie nsogbu, dị nnọọ na-aga "Mmasị" ma gbanyụọ Time Machine ma ọ bụ na-eche ọtụtụ minit ka awa ka Time Machine mezue ọrụ. Ọzọ ihe ngwọta na-dị nnọọ awụgharị na "mechaa" ogbo na-aga ogologo "Export"> "Media Brower".
# 7. iMovie ụgbọala na-adọkpụ-adịghị arụ ọrụ
Ọ bụrụ na ị iMovie ụgbọala na-adọkpụ adịghị arụ ọrụ, ebe a bụ ihe ụfọdụ nwere ike idozi nke:
Open "Akara ókwú" ngwa ego iji jide n'aka na niile Akara ókwú na-arụ ọrụ.
Mepụta ọhụrụ ọrụ na onye abanye na na akaụntụ ọhụrụ Malitegharịa ekwentị iMovie. Ọ bụrụ na a na-arụ ọrụ na ị nwere font nke dị ka ọ na-metụtara ọrụ gị akaụntụ.
Gaa Disk Utility rụkwaa ikikere Malitegharịa ekwentị OSX.
Ọ bụrụ na ihe niile ọzọ ada, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịdị mkpa ka reinstall Mac OS.
# 8. Aperture 3 video bụghị gosiri na Movie
Ọ bụrụ na ndị video faịlụ gị Aperture n'ọbá akwụkwọ na-referenced faịlụ, echekwara na ọnọdụ (dị ka mpụga ike mbanye) na-adịghị jisiri, ha na-adịghị ike na-eji na iMovie.
Iji dozie ihe iseokwu a, dị nnọọ ịgbanwe referenced faịlụ ka jisiri faịlụ site na-ahọpụta ahụ mejọrọ videos ma họrọ File> inokota Nna-ukwu. Mgbe ahụ họrọ ma idetuo referenced faịlụ ka nna gị ukwu n'ọbá akwụkwọ ebe ma ọ bụ ịkpali ndị faịlụ ka jisiri n'ọbá akwụkwọ ọnọdụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịnweta ya na iMovie.
# 9. Ken Burns mmetụta bụ manụ
iMovie ga-akpaghị aka ịgbakwunye Ken Burns mmetụta na ka oyiyi ị mbubata. Ọ bụrụ na ị na-achọghị-eme nke a mmetụta, na-aga Njikwa> Project Njirimara. Na mmapụta elu window, ịchọta ndị mbụ Photo pụrụ isi chọta mmapụta menu, họrọ Fit na ụba, na pịa OK bọtịnụ. Mgbe ahụ n'ime a na oru ngo, ọ bụla ka oyiyi ị mbubata agaghị eme nke a mmetụta.
Cheta na: ị ga-ekpebi nke a Fit na ụba nhọrọ oge ọ bụla ị na-amalite ọhụrụ oru ngo; ma ọ bụghị ihe oru ngo defaults ka Ken Burns mmetụta.
# 10. Mbupụ N'ihi ọjọọ
Gị okokụre ngwaahịa ga-ele anya mma ma ọ bụrụ na ihe oyiyi ndị ọ dịkarịa ala 640-site-480. Ihe ọ bụla obere, na iMovie ahuwo Nnam elu ihe oyiyi na-eme ka ha dabara eku. Ya mere, mgbe exporting, họrọ Share> QuickTime> Movie ka MPEG-4 na pịa Save. Mgbe ahụ, gị video àgwà ga-aka mma.
> Resource> iMovie> iMovie: iMovie Nchọpụta nsogbu Atụmatụ